Vato nolokoina niova ho biby mahafatifaty | Famoronana an-tserasera
misy ambonin'ny dia azo avadika ho lamba fohy. Izany no zava-misy amin'ireo vato kely ireo izay nanovan'ny artista japoney ho biby cuckoo tamin'ny fandokoana azy ireo, azontsika tsara, inona ny akrilika, na dia mety ao anaty menaka koa aza izany.
ny sasany vato mamorona ny tenany Izy ireo dia efa manome ny aingam-panahy rehetra amin'ity mpanakanto ity izay manamafy fa io vato io ihany no mitaona azy handoko ny biby roa. Ary raha mijery akaiky ny endrik'ireo vato voaravaka izy ireo dia ataon'izy ireo ho toy ny voromailala na vorona kely.
Akie Nakata no mpamorona ireo vato vita amin'ny loko ireo ary niova ho biby kely. Izy ihany no manamafy fa rehefa mitady vato izy ireo dia ireo no mitaona azy handoko porcupine kely, na andiana vorondolo kely izay mamela antsika hahagaga ny hatsaran'izy ireo.
Raha ny marina dia nilaza izy fa mandra-pahatongan'ireo maso ireo velona, ​​toy ny hoe teo ireo vorondolo kely mijery azy na izay porcupine mampihomehy, tohizo ny fandokoana azy ireo. Ary nahita ohatra tamin'ny artista marobe izay naka ny vato hamadika azy ireo ho zavakanto izy ireo. James Brunt sy ny mandalas dia iray amin'ireo ohatra ireo, na Sary sokitra vato tsy misy fotony nataon'i Devin Devine.
Ny marina izay maro amin'ireo vato kelin'i Nakata voaloko Mampahatsiahy izy ireo izany toetra izay ananantsika ankehitriny lavitra antsika izany amin'izao andron'ny quarantine eto amin'ny firenentsika izao.
Afaka mahita izany isika fikitika manokana amin'ny fampiasana ny vato handoko biby toa ilay ananantsika ambonin'ireto tsipika ireto. Na ilay tigra mandry mijery ilay mijery ny antsipirian'ny vato nolokoana fahasoavana lehibe.
Mamporisika anao izahay hanaraka ny Tambajotra sosialy Instagram nataon'i Akie Nakata hahafahanao manohy ny asany lehibe amin'ireo vato ireo. A fomba mahatalanjona tsy hahavery antsipiriany ny fandrosoanao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » mpanakanto » Ireo vato kely ireo dia niova ho biby mahafatifaty rehefa nolokoina
Niala tsiny i McDonald's noho ny tsy fahampian'ny tsiro amin'ny fanovana ny sary famantarana azy